कपडा पसलको आडमा ब्राउनसुगर कारोबार - Worldnews.com
कपडा पसलको आडमा ब्राउनसुगर कारोबार
नेपालगञ्जमा कपडा पसलको आडमा ब्राउनसुगरको ‘डिलर’ नै सञ्चालन गरेको खुलासा भएको छ ।
न्यूरोडमा रहेको सत्यम फैन्सी बस्त्रालयका सञ्चालक अरुण जयसवाल ठूलो मात्रामा ब्राउनसुगरसहित पक्राउ परेका हुन् । ठूलो कपडा पसल सञ्चालन गरेका जयसवालले ब्राउनसुगरको धन्दा गर्ने कुरा प्रहरीलाई विशेष सुराक आएको थियो ।
ब्राउनसुगर खान होटलको कोठा बुक
नेपाल समाचारपत्र, बाँके । सीमावर्ती भारतीय बजार रुपैडिहाबाट किनेर ल्याउने ब्राउनसुगर खानका लागि प्रयोगकर्ताले होटलको कोठा लिने गरेको पाइएको छ । बाहिर बसेर खादा प्रहरीले...
लागु औषध ओसारपसारको अर्को भित्री खेल, मुखमा राखेर ब्राउनसुगर सप्लाई
नेपाल समाचारपत्र, बाँके । लागु औषध ब्राउनसुगर ‘सप्लाई’ गर्न अनेक तरिका अपनाउने गरिएको छ । सीमावर्ती भारतीय बजारमा सहजै पाइने ब्राउनसुगर नेपाल भित्र्याउन कारोबारीले विविध...
News of Nepal 2017-07-10
१६ किलो अफिम नष्ट
नेपाल समाचरपत्र, बाँके । प्रहरीले बरामद गरेको लाखौं रुपैया बराबरको लागु औषध अफिम शुक्रबार नष्ट गरिएको छ । बालुवाङका जयबीर घर्तिमगरको साथबाट बरामद गरिएको १६ किलो अफिम बाँके...
News of Nepal 2017-07-07
सुध्रेर सुधार्न लम्केका अभिराज
बाँके । लागु औषधविरुद्धको जनचेतनामूलक कार्यक्रम या कार्यशाला गोष्ठीहरुमा नेपालगञ्जका अभिराज क्षेत्रीलाई अगाडि सार्ने गरिन्छ । सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले गर्ने...
News of Nepal 2018-02-01
रोडसँगै जुम्लामा पुग्यो लागु औषध
नेपाल समाचारपत्र, बाँके सीमावर्ती बजार नेपालगञ्ज या भारतीय बजार रुपैडिहाबाट पहाडी जिल्लाहरुमा लागु औषधको कारोबार बढेको छ । सडक सञ्जालले जोडेसँगै नेपालगञ्ज या रुपैडिहाबाट...
News of Nepal 2018-07-21
भारतीय बजारमा नेपाली उपभोक्ता किन धाउँछन? यस्तो छ कारण
दशैंमा मात्रै होइन यहाँका बासिन्दा किनमेलका लागि सधैंभरी रुपैडिहा जाने गर्छन् । रुपैडिहाका पसलमा नेपाली ग्राहकको खुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैन । यहाँका व्यापारी भने झिँगा धपाएर...
दशैंमा मात्रै होइन यहाँका बासिन्दा किनमेलका लागि सधैंभरी रुपैडिहा जाने गर्छन् । रुपैडिहाका पसलमा नेपाली ग्राहकको खुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैन । यहाँका व्यापारी भने झिँगा धपाएर बस्नुपर्छ । नेपालगञ्ज सदरलाइनमा जुत्ता चप्पलको व्यापार गर्दै आउनुभएकी मिरा सिलवालको गुनासो हो यो । दशैंलाई लक्ष्य गरेर नेपालगञ्जमै व्यापारीहरुले नयाँ नयाँ सामान मगाए पनि सस्तो पाइने लोभमा नेपाली उपभोक्ता...
८० वर्षदेखि लोभ्याउने जेरी
रोविन पौडेल, पोखरा सेलरोटी पकाउने जसरी नै गिल्याइएको चनाको बेसन वा मैदालाई तेलमा पकाएर झिकिने, अनि चिनीको पाकमा डुबाएपछि बनाइनेमध्येको एउटा परिकार नचिन्ने सायदै होलान्। कतै जेरी, कतै जुलेबी भनिने यो परिकार पोखराको एक मिठाइ पसलमा तराईका पोख्त कारिगरले बनाएभन्दा फरक आकार तथा रङको भेटिन्छ। पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको भीमसेनटोलका चुल्याजु परिवारको मिठाइ पसलमा अतिरिक्त रङको मिश्रण...
प्रहरीखोरमा ट्यापे किन मोटाउँछन् ?
कुमार श्रेष्ठ, बाँके । लागु औषधसहित एकजना समातिए । अनुसन्धानका क्रममा उसलाई प्रहरीखोरमा राखियो । ३५ दिनमा ती युवा ११ किलो मोटाए । लागु औषधमा कडाई गरेको प्रहरीले ‘भेट्टाएका’ जतिलाई थुन्ने गरेको छ । प्रहरीखोरमा पुगेपछि टेन्सन भएर मान्छे झन् गल्नु पर्नेमा लागु औषध प्रयोगकर्ता भने मोटाएर निस्किने गरेका छन् । ‘हामीकहाँ आउने लागु औषध प्रयोगकर्ता सबैको तौल बढ्छ, जिल्ला प्रहरी...
काठमाडौंबाट लागु औषध लिन नेपालगञ्ज
नेपाल समाचारपत्र, बाँके । सीमावर्ती भारतीय बजार रुपैडिहाबाट दुई युवा नेपालगञ्जतिर अगाडि बढ्दै थिए । दशगजा पार भएपछि जमुनाहामा रहेको नेपाल प्रहरीले उनीहरुको खानतलासी थियो । दुवैको साथमा लागु औषध फेला प¥यो । ठूलो मात्रामा लागु औषध नाइट्राजेपाम र स्पामो सहित पक्राउ गर्ने युवाहरु सिन्धुपाल्चोकका भोजराज भट्टराई र बर्दियाका दिपेश बस्नेत थिए । युवाहरु लागु औषध लिन काठमाडौंबाट नै...
युवती पनि दुव्र्यसनमा
बाँके, (नेस) डोल्पा जिल्लाकी २० वर्षीया युवती ३० ट्याब्लेट नाइट्रोजेपामसहित नेपालगञ्जमा पक्राउ परेकी छन् । सीमावर्ती भारतीय बजार रुपैडिहाबाट लागु औषध बोकेर नेपाल भित्रिदै गरेकी उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय, जमुनाहाले पक्राउ गरेको हो । स्कुटीमा आउदै गरेकी उनले पाइतलामा राखी चप्पलले च्यापेर नाइट्रोजेपाम ल्याउदै थिइन् । सीएमए पढ्दै गरेकी ती युवती नेपालगञ्जमै बस्छिन् । लागु औषधमा...